Uqhubeka Usebenzisa Lelo Lizwi "Creative" ... | Martech Zone
Uqhubeka Usebenzisa Lelo Lizwi “Ngobuciko”…
NgoMgqibelo, Novemba 7, 2020 NgeSonto, uJanuwari 24, 2021 Douglas Karr
URobert Half Technology futhi Iqembu Lokudala ushicilele isifundo ne-infographic, I-Digital Marketing Dissonance, lapho ama-4 kuma-CIO ayi-10 athi inkampani yabo ayinakho ukwesekwa okudingekayo kumaphrojekthi wokuthengisa wedijithali.
Ngenkathi ngingangabazi ukuthi lokho kunembile, isifundo bese siphula enye idatha ibe ngamabhakede amabili, Abaphathi be-IT futhi abaphathi bokudala. Angiqiniseki ukuthi ngikholelwa ukuthi kukhona uhlobo oluthile lokuhlangana phakathi kokuba ngumuntu we-IT noma ukuba ngumuntu onobuciko. Ukusebenza kule mboni iminyaka engama-25, ngihlangane nabaholi abangahlelekile abaqhutshwa inqubo, ukuphepha, izinkinobho eziphezulu ze-IT ezazakha ngendlela emangalisayo.
Uyaqhubeka nokusebenzisa lelo gama, angicabangi ukuthi kusho ukuthi ucabanga ukuthi lisho ukuthini.
U-Inigo Montoya ovela kuThe Princess Bride
Abantu kwesinye isikhathi bangikhokhela ngokuncoma ukuba nobuciko. Angikholwa ukuthi nginguye. Ngiyazi ubuciko obuningi futhi bangishaya ngamandla abo okucabanga ngezixazululo zokudala zezinkinga ezinzima. Lokho akusho ukuthi angiphumeleli, noma kunjalo. Kodwa-ke, izindlela zami zokuza nesisombululo azikafiki lokusungula, kudlulile ukuphikelela. Ngazakhela udumo ngokuthola ukuthi ngenza kanjani ukuthi izinto zisebenze nazo zonke izinkampani engisebenze nazo.
Kukhona amathani ama-analogies afana nalokhu emlandweni. Abantu abaningi abaphumelele bazokutshela ukuthi bekungelona ikhono labo lokuthola isixazululo esikhulu, bekungukuthi babenenkinga ngokunengqondo futhi basebenza ngezimo kaninginingi baze baqhamuke nesisombululo. Izikhathi eziningi, lezo zixazululo ziza ngokuba nenethiwekhi enamandla futhi enolwazi. Lapho sihlangana neqembu, kuyamangaza njalo ukuthi sikwazi kanjani ukufika okudala izixazululo. Ingabe sasinobuhlakani? Noma bekumane nje kuyinhlanganisela yezinsizakusebenza ezinikeze izithako ezifanele ukuze kuvele isixazululo sokudala? Ngicabanga ukuthi kungokugcina.
Ngokujabulisayo, ukuphikelela kuyisikhundla esihle sethalente.
USteve Martin, Ukuzalwa Okumile: Impilo KaComic
Eminyakeni eminingi edlule, ngatshelwa ukuthi kunezinhlobo ezintathu zabasebenzi, abaphakamisa amafu, abadudulayo nabadonsayo. Ezinye izinkampani zikholelwa ukuthi kubalulekile ukuthi banabo bonke abaphakamisi - ongqondongqondo bokudala abahlala behlinzeka ngezixazululo noma imibono emisha. Laba bantu bangakha ngendlela emangalisayo. Kodwa-ke, uma uhlala njalo uza nemibono emisha uswele izinsiza ozidingayo ukusungula izixazululo nezinqubo ezidinga ukuhlolwa ngokugcwele bese zenziwa ekukhiqizeni.
Ukuba nabaholi abadonsela iqembu ezinhlosweni nokuba nabashushumbisi abashayela lapho kubalulekile. Ngakho-ke, ngabe ubadinga ngempela abaphathi bokudala? Noma udinga inhlanganisela yabaphathi abazophakamisa, badonse futhi baqhubekele amaphrojekthi phambili ukuze inkampani ikwazi ukubona umbono wayo? Ukuqina ngobuqotho kuvotela ubuciko kunoma yiluphi usuku.
Tags: ozelwe emileizinhloso zokudalaabaphathi bokudalalokusungulaabasebenziukwaziswa kwesimanjeInigo Montoyaitit executiveit kuqhathaniswa creativeUbuholiPhakamisaukuphikelelaInkosazana kaMakotiDonsaPhusharobert uhhafurobert isigamu ubuchwephesheSteve Martinithalenteiqembu lokudala